ဆော်ဒီအာရေးဗျနယ်စပ်မြို့ Asir တွင် စာသင်ကျောင်းပေါ်သို့ ဗုံးကြဲဒရုန်းတစ်စင်းပျက်ကျမှုဖြစ်ပွား - Xinhua News Agency
ဆော်ဒီအာရေးဗျနယ်စပ်မြို့ Asir တွင် စာသင်ကျောင်းပေါ်သို့ ဗုံးကြဲဒရုန်းတစ်စင်းပျက်ကျမှုဖြစ်ပွား
တရုတ်လူငယ်များက တရုတ်နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှု နှင့် CPC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရခြင်းအပေါ် ဂုဏ်ယူ
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် ယနေ့မှစ၍ အားလုံးလွှမ်းခြုံ Nucleic acidစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ မလိုအပ်ပါကရွှေလီမြို့သို့အဝင်အထွက်မလုပ်ကြရန် ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေသော ဆင်အုပ်စု အနောက်တောင်ပိုင်းသို့ ဦးတည်နေ
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်က ထပ်တိုးကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ (၆၅) ဦး ရှိ၊ ၎င်းတို့အနက် (၈)ဦးမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ဖြစ်
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် နေ့စဉ်ထပ်တိုးသည့် ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာဦးရေ ၃ ရက်ဆက်တိုက် ၁၀,၀၀၀ ကျော်ရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အီဂျစ်နိုင်ငံတို့က ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိ ပါလက်စတိုင်းပြည်သူများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ လှူဒါန်းမည်
ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ရှိ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကို အရေအတွက်လျှော့ချသွားရန်ရှိ
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်၌ ဘတ်စ်ကားနှင့် တွဲယာဉ် တိုက်မိမှုကြောင့် လူ ၂၇ ဦး သေဆုံး ၊ ၃၀ ကျော် ဒဏ်ရာရရှိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ရှိလာ
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွင် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားမှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၁၁၇)ဦးထိ မြင့်တက်လာ
ယီမင်နိုင်ငံရှိ ဟူတီသူပုန်အဖွဲ့ဝင်များက ပစ်လွှတ်လိုက်သော မောင်းသူမဲ့ဗုံးကြဲဒရုန်း(UAV) တစ်စင်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဆော်ဒီဦးဆောင်သောမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့က ပစ်ချခဲ့စဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
ရီယာ့ဒ် ၊ ဇွန် ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော Asir မြို့ရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပေါ်သို့ ဇွန် ၁၃ ရက် က ဗုံးကြဲဒရုန်းလေယာဉ်တစ်စင်းပျက်ကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဆော်ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဟူတီပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့၏ ဒရုန်းဖြင့် နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မရှိကြောင်း ဆော်ဒီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ကြီး Abduljalil Al Jilban ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ ဆော်ဒီသတင်းအေဂျင်စီက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယခုဖြစ်စဉ်သည် ဆော်ဒီအာရေးဗျပစ်မှတ်များ (အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ရှိ မြို့များ)ကို ဦးတည်၍ ယီမင်နိုင်ငံရှိ ဟူတီသူပုန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မကြာခဏပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် နောက်ဆုံး တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတိုက်ခိုက်မှုအများစုသည် ၎င်းတို့၏ ပစ်မှတ်ဆီသို့ မရောက်ရှိမီ လမ်းခုလပ်မှာပင် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပျက်စီးသွားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယီမင်နိုင်ငံသမ္မတ Abd-Rabbu Mansour Hadi ၏ အစိုးရအဖွဲ့ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် ဆော်ဒီအာရေးဗျနိုင်ငံက ဦးဆောင်၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ယီမင်နိုင်ငံရှိ ဟူတီပြည်သူ့စစ်သူပုန်အဖွဲ့အပေါ် စစ်ပွဲတစ်ခု ဆင်နွှဲနေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Bomb-laden drone falls at school in Saudi border city Asir
RIYADH, June 13 (Xinhua) — A bomb-laden drone fell on Sunday ataschool in the Saudi border city Asir, the Saudi Civil Defense Ministry said.
The ministry’s spokesman Captain Abduljalil Al Jilban revealed that no injury was reported in the latest Houthi militia’s attack, according to the Saudi Press Agency.
The incident was the latest of the frequent attacks launched by Yemeni Houthi rebels against Saudi targets, especially border cities. Most of the attacks had been foiled before reaching their targets.
Saudi Arabia has been leadingawar in Yemen against Houthi militia since 2015, in support of the government of Yemeni President Abd-Rabbu Mansour Hadi. Enditem
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မိုးကြိုးပစ်ခံရမှုကြောင့် လူ ၇၀ ဦးနီးပါး သေဆုံး
ကာကွယ်ဆေးများအပေါ် ပြင်သစ်အရာရှိ၏ မှတ်ချက်မှာ “ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု” ဟု ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တုံ့ပြန်